Lungiselela ukuphuphuma okumnandi: i-Luxury Rooster izothatyathwa yi-Elephant of the Yellow Dog. Ziziphi izixhobo zokuxhasa iingubo zeholide? Abathengisi nabalingisi beenkwenkwezi bancomela okukhethwa kukho.
Imihlobiso emihle yoNyaka omtsha
Into ebalulekileyo ye-2018 - uMhlaba-inquma umbala wemibala yemigcobo efanelekileyo yokubhiyozela: ngokuxhamla kwi-sandam-caramel shades. Ngaba ukhetha iisethi ezifanelekileyo? Khetha iimveliso kwi-lemon, ebomvu kwaye ivuke igolide. Iifom ezilula, izinto ezintle, ezifakwe kwiimpawu zendalo kunye ne-enamel yilokho okufunekayo. Gweba amatye atyhidiweyo - iibrabhu ezibomvu neziqhumayo, ii-corals, igromegranates, kunye ne-silvery iron kunye ne-motley zokutyebisa. Inja ayithandi ukubonakalisa ngokugqithiseleyo.
Iigugu zeGolide - iiMascots eziNtsundu
Nangona kunjalo, isilwanyana esinobuhle, esaba ngumqondiso we-2018, asiyonto engathandekiyo kwintando yobuhle. Zive ukhululekile ukukhetha iindandatho ezimnandi, amacici namacwecwe aneempawu ezimnandi kunye neentyatyambo eziqhafazayo, zenziwe ngamatye okuhlaza, okwesibhakabhaka nokuluhlaza. I-topazi ene-shammering, i-citrine, isafire, i-beryl, i-emeralds iya kutsala inqaku leNja. Okungaphandle kwelitye le-tiger: okushicilelwe "ikati" yokushicilela kuya kuthusa umgcini wonyaka.
Intloko ibeka amatye anqabileyo
Abo banqwenela iingubo, kufuneka baqwalasele izixhobo ezisuka kumatshini afudumele (ubhedu, ubhedu) kunye neemaminerali ezinqwenelekayo ezinqamlekileyo-amber, malachite, apatite, agate yelanga, i-chrysolite okanye i-jade. Kubalulekile ukuba iimveliso zenziwe ngokungafanelekanga - inja ayiyi kukunyamezela ukunganyaniseki, i-slovenliness okanye umgangatho omgangatho wezinto eziphathekayo.
Iigqoka zokugqoka iingubo zabasetyhini befashoni
Ukukhwela kwintsimbi yezinto zokugcoba iingubo zikaDiane Kordas
Izixhobo zengubo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neengubo eziluhlaza
I-TOP-3 zobunxibe bendawo yonke yokugqoka isambatho
Umhlobiso oxabisekileyo kaLouis Vuitton: umbusi wengubo uBlorssom BB
Yintoni enokuyenza xa kukho iinzwane ezinqabileyo
Iidraphi zokupheka izifundo ze sibini
I-vanilla ihamba nge-jamberry jam
I-hypnosis njengendlela epheleleyo yokunciphisa umzimba